အိမ်ကိုအနံ့ကောင်းအောင်လှည့်ကွက် ၃ ချက် Bezzia
တောရက်စ် | 11/09/2021 16:00 | နေအိမ်
အိမ်တွင်အနံ့ကောင်းသည်သန့်ရှင်းပြီးကြိုဆိုသောအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခံစားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤအရာကိုအောင်မြင်ရန်သင်၏အိမ်တစ်ခန်းစီ၌သန့်ရှင်းမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုကောင်းရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်သန့်ရှင်းရေးတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာတစ်ချို့ကကျူးလွန်ကြတယ် အိမ်ကိုလုံးဝသန့်စင်ရန်ခွင့်မပြုသောအမှားများမရ။ အိမ်ကအနံ့အသက်ကောင်းဖို့သေချာစေဖို့နည်းလမ်းလေးတွေကိုလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။
၎င်းသည်လေသန့်စင်ဆေးများ (သို့) ရေမွှေးအတုများဖြင့်မကောင်းသောအနံ့များကိုဖုံးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သော့ချက်မှာသန့်ရှင်းမှု၊ အိမ်၏နေ့စဉ်လေ ၀ င်လေထွက်နှင့်သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းတို့တွင်မကြာခဏသတိမမူမိသောအသေးစိတ်အချက်ဖြစ်သည်။ မင်းအိမ်ကိုအနံ့အသက်ကောင်းစေချင်ရင်သူတို့ထဲကတစ်ချို့ကိုငါတို့ချက်ချင်းပြောမယ် လွယ်ကူ၊ ရိုးရှင်းပြီးတာရှည်ခံနည်းလမ်းဖြင့်အောင်မြင်ရန်အကြံဥာဏ်များ.
1 အနံ့ခံကောင်းသောအိမ်သည်လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းမှစတင်သည်
အနံ့ခံကောင်းသောအိမ်သည်လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းမှစတင်သည်
အလုပ်အလွန်ပင်ပန်းသောနေ့ပြီးနောက်အိမ်ပြန်ခြင်းသည်သင့်တော်ကောင်းမွန်သောအနားယူရန်လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်အိမ်ကမသန့်ရှင်းဘူး၊ အနံ့ကောင်းကောင်းမရှိဘူး၊ မကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိတယ်၊ အိမ်တစ်လုံးကပေးသင့်တဲ့သာယာဝပြောမှုအခြေအနေကိုခံစားရတာကပိုခက်ခဲတယ်။ လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းခြင်းသည်အိမ်အနံ့အသက်ကောင်းစေရန်သော့ချက်ဖြစ်သည် ပြတင်းပေါက်များကိုတစ်နေ့လုံးဖွင့်ထားရန်မလိုအပ်ပါ။
ပြတင်းပေါက်များကိုနံနက် ၁၅ မှမိနစ် ၂၀ အထိဖွင့်ခြင်းသည်လုံလောက်သည်။ အိပ်ယာများကိုဖွင့ ်၍ အိပ်ယာများကိုဖွင့်ပါ အိပ်ယာမ ၀ င်ခင် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှလေ ၀ င်လေထွက်ရရှိရန်လက်ရှိကိုရှာပါ၊ ၎င်းသည်ပိုမိုထိရောက်လိမ့်မည်။ ဤရိုးရှင်းသောနေ့စဉ်လက်ဟန်ဖြင့်အခန်းများမှမကောင်းသောအနံ့များကိုသင်ဖယ်ရှားနိုင်လိမ့်မည်။
သင်သန့်ရှင်းရေးကိရိယာများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အချိန်မဖြုန်းပါကနာရီသန့်ရှင်းရေးအသုံးမ ၀ င်ပါ။ မီးဖိုချောင်၏ကြမ်းပိုးများနှင့်အ ၀ တ်များ၊ ကြမ်းတိုက်တံ၊ တံမြက်စည်း (သို့) သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်လေ့ရှိသောအသုံးအဆောင်တစ်ခုခုကို အားလုံး ဤကိရိယာများသည်မသန့်ရှင်းလျှင်အပျက်အစီးများနှင့်အကြွင်းအကျန်များကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်၎င်းတို့သည်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေသောမကောင်းသောအနံ့များ၊ ဘက်တီးရီးယားများ၊ မှိုများနှင့်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒါကိုရှောင်ဖို့၊ သင်လုပ်ရမယ် သန့်ရှင်းရေးအသုံးအဆောင်အားလုံးကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ သုံးပြီးတိုင်းဖြစ်နိုင်လျှင်မကြာခဏသုံးပါ။ ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းတွေကိုပြန်သုံးတဲ့အခါမှာမင်းအိမ်ကိုသန့်ရှင်းပြီးအနံ့ဆိုးတွေကင်းဖို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေမှာရှိလိမ့်မယ်။ ညစ်ပတ်နေသည့်ကြမ်းတိုက်၊ အစာအကြွင်းအကျန်များနှင့်အ ၀ တ်တစ်ထည်၊ ကြမ်းပြင်မှအကြွင်းအကျန်များပါသောတံမြက်စည်းလှည်းခြင်းသည်အညစ်အကြေးများကိုပိုမိုဖြန့်ဝေရန်သာဖြစ်သည်။ နှစ်ထပ်အလုပ်သက်သက်ကိုရှောင်ပါ သင်၏သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများအမြဲအဆင်သင့်ထားပါ.
နေ့စဉ်လေ ၀ င်လေထွက်နှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းအပြင်သင်၏အိမ်အနံ့ကိုအမြဲကောင်းမွန်နေစေရန်နည်းလမ်းအနည်းငယ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အနံ့ဆိုးများနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများရှောင်ပါ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်အနံ့ဆိုးထွက်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုမဖျောက်ဖျက်နိုင်ဘဲသာဖြစ်သည်။ အဲဒီအစားမင်းဒီလှည့်ကွက်တွေထဲကတစ်ခုကိုစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးဖြန်းကွန်တိန်နာတစ်လုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးရေပျော့ဆေးနှင့်ရောပါမရ။ အိပ်ရာမ ၀ င်မီနေ့တိုင်းအိပ်ယာများကိုအမြဲသစ်စဆေးနံ့ရရန်ဤအရောကိုဖြန်းပါ။
ပန်းခြောက်များပါသောအိတ်များမရ။ Lavender သည်ပြီးပြည့်စုံသည်၊ သင် potpourri နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာရနံ့အနည်းငယ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသောအိပ်ယာအကြားနှင့်သင်၏အိမ်ဝင်ပေါက်ကဲ့သို့သင်၏အိမ်ထောင့်များအကြားရှိအနံ့ရနိုင်သောအထည်အိတ်များကိုဗီဒိုများထဲသို့ထည့်ပါ။
တစ်သျှူးများတွင် Bicarbonateမရ။ ဆိုဖာပေါ်ရှိကော်ဇောများနှင့်ထူသောပိတ်စများသည်လျှော်ရခက်ပြီးအနံ့ဆိုးများဖြစ်စေသောဖုန်များစွာကိုစုဆောင်းမိတတ်သည်။ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ ခြောက်သွေ့သောမုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကိုကော်ဇောနှင့်ဆိုဖာပေါ်တွင်ဖြန်းပေးပါ။ နောက်နေ့မနက်မှာသင်လုပ်ရမယ် လေဟာနယ်နှင့် bicarbonate ၎င်းသည်မကောင်းသောအနံ့များကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
ဤအချက်များအားလုံးသည်သင့်အိမ်အနံ့ကိုကင်းစင်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်မင်းလိုမျိုးအလှဆင်ထားတဲ့အဖြေတွေကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ် ရနံ့သင်းသောဖယောင်းတိုင်များ၊ ရနံ့လောင်သောမီးများသို့မဟုတ်ပန်းခြောက်များမရ။ သေးငယ်တဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့မင်းအနားယူနိုင်ပြီးအေးချမ်းတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုခံစားနိုင်တဲ့ပိုနွေးထွေးတဲ့အိမ်ကိုရလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » အိမ်ကိုအနံ့အသက်ကောင်းအောင်လှည့်ကွက် ၃ ချက်